၎စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲ လူချစ်လူခင်များအောင် လုပ်ကြည့်ရအောင်
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း လူချစ်လူခင်များအောင် လုပ်နည်း
25 May 2017 . 12:09 PM
လူချစ်လူခင်များဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမှ မဟုတ်တာ။ ဦးနုတောင် “မိတ္တဗလဋီကာ” ဆိုပြီး အသေးစိတ်ရေးခဲ့သေးတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို စတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ ဒီလူရဲ့ပုံစံက ဘယ်လိုလဲ၊ ဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်လာတာလဲဆိုပြီးတော့ ပထမစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကို အကဲခတ်ပြီး အမှတ်ပေးဆုံးဖြတ်တတ်တယ်။ စတွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ကို သဘောကျသွားအောင်လို့ ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ကို စတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောဆိုဆက်ဆံသင့်တယ်။ ဖော်ရွေပြုံးရွှင်တဲ့ မျက်နှာထားမျိုးနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ စတွေ့ချင်းမှာ မကောင်းမြင်စိတ်မထားဘဲနဲ့ အပြုသဘောဆောင်ပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ အဝတ်အစားမျိုး ဝတ်ဆင်ထားတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
၂။ မျက်လုံးချင်း စကားပြောတတ်ပါစေ။
စတွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကို စကားပြောတဲ့အခါမှာ မျက်လုံးချင်း ချိတ်ဆက်ပြီး ပြောဆိုတတ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ တအားကြီးစိုက်ကြည့်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ သိသားထင်ရှားစေတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြောဆိုတဲ့အခါမှာ မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီး ပြောတာက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
၃။ အပြုံးနဲ့ တန်ဆာဆင်ပါ။
တန်ဖိုးကြီးတံဆိပ်တွေထက် နှုတ်ခမ်းက ထွက်လာတဲ့အပြုံးတစ်ပွင့်က ပိုပြီးငြိမ်းချမ်းစေပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို စတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ပြုံးပြလိုက်တာက အပျော်တွေကူးစက်စေပါတယ်လို့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ သိရပြန်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ စတွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကို ပြုံးပြတာအကောင်းဆုံးပဲ။
လူကိုမမြင်ဖူးပေမယ့် နာမည်သိနေတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့စတွေ့မယ်ဆိုရင် “မင်္ဂလာပါ ကိုကျော်စိုးအောင် တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ” လုိ့ နှုတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်လူတောင် ကိုယ့်ကို အသိအမှတ်ပြုစေပါတယ်။ လူကိုမမြင်ဖူးပေမယ့် နာမည်ကို သိထားတာက မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့ အကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုပါပဲ။
၅။ ရှေ့ကို မသိမသာကိုင်းပါ။
လူတစ်ယောက်နဲ့ စတွေ့တဲ့အခါမှာ တစ်ခုခုပေါ်မှာ မှီထားဖို့မလိုပေမယ့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ရှေ့ကိုမသိမသာ ကိုင်းသင့်ပါတယက်။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေထိုင်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ် သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ ပြသတဲ့သဘောပါပဲ။
ကဲ . . ဒီအချက်တွေက ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့အချိန်မှာ သုံးတတ်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်တာပဲ။ ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးဝင်မလဲဆိုရင် အလုပ်အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်ရယ် ယောက္ခမလောင်းကြီးနဲ့တွေ့မယ်အချိန်ရယ်ပဲလေ (ဟဲဟဲ နောက်တာပါ) ။ ကဲ . . . အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျး လူခဈြလူခငျမြားအောငျ လုပျနညျး
လူခဈြလူခငျမြားဖို့ဆိုတာ လှယျတာမှ မဟုတျတာ။ ဦးနုတောငျ “မိတ်တဗလဋီကာ” ဆိုပွီး အသေးစိတျရေးခဲ့သေးတယျ။ လူတဈယောကျကို စတှပွေီ့ဆိုတာနဲ့ ဒီလူရဲ့ပုံစံက ဘယျလိုလဲ၊ ဘယျလိုဝတျစားဆငျယငျလာတာလဲဆိုပွီးတော့ ပထမစက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျးကို အကဲခတျပွီး အမှတျပေးဆုံးဖွတျတတျတယျ။ စတှတေဲ့လူတဈယောကျဟာ ကိုယျ့ကို သဘောကသြှားအောငျလို့ ဘယျလိုနထေိုငျသငျ့တယျဆိုတာကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
လူတဈယောကျကို စတှပွေီ့ဆိုတာနဲ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲ ပွောဆိုဆကျဆံသငျ့တယျ။ ဖျောရှပွေုံးရှငျတဲ့ မကျြနှာထားမြိုးနဲ့ လကျဆှဲနှုတျဆကျလိုကျပါ။ စတှခေ့ငျြးမှာ မကောငျးမွငျစိတျမထားဘဲနဲ့ အပွုသဘောဆောငျပွီး ပွောဆိုဆကျဆံတာက ပိုကောငျးပါတယျ။ ပွီးတော့ လှတျလပျပေါ့ပါးတဲ့ အဝတျအစားမြိုး ဝတျဆငျထားတာက ပိုကောငျးပါတယျ။
၂။ မကျြလုံးခငျြး စကားပွောတတျပါစေ။
စတှတေဲ့လူတဈယောကျကို စကားပွောတဲ့အခါမှာ မကျြလုံးခငျြး ခြိတျဆကျပွီး ပွောဆိုတတျတာက ပိုကောငျးပါတယျ။ တအားကွီးစိုကျကွညျ့တာမြိုး မဟုတျဘဲနဲ့ သိသားထငျရှားစတေဲ့ စကားလုံးတှကေို ပွောဆိုတဲ့အခါမှာ မကျြလုံးကိုကွညျ့ပွီး ပွောတာက ပိုသငျ့တျောပါတယျ။
၃။ အပွုံးနဲ့ တနျဆာဆငျပါ။
တနျဖိုးကွီးတံဆိပျတှထေကျ နှုတျခမျးက ထှကျလာတဲ့အပွုံးတဈပှငျ့က ပိုပွီးငွိမျးခမျြးစပေါတယျ။ လူတဈယောကျကို စတှတေဲ့အခြိနျမှာ ပွုံးပွလိုကျတာက အပြျောတှကေူးစကျစပေါတယျလို့ လလေ့ာမှုတဈရပျအရ သိရပွနျပါတယျ။ အဲဒီတော့ စတှတေဲ့လူတဈယောကျကို ပွုံးပွတာအကောငျးဆုံးပဲ။
လူကိုမမွငျဖူးပမေယျ့ နာမညျသိနတေဲ့ လူတဈယောကျနဲ့စတှမေ့ယျဆိုရငျ “မင်ျဂလာပါ ကိုကြျောစိုးအောငျ တှရေ့တာ ဝမျးသာပါတယျဗြာ” လုိ့ နှုတျဆကျလိုကျမယျဆိုရငျ တဈဖကျလူတောငျ ကိုယျ့ကို အသိအမှတျပွုစပေါတယျ။ လူကိုမမွငျဖူးပမေယျ့ နာမညျကို သိထားတာက မိတျဆှဖှေဲ့ဖို့ အကောငျးဆုံးလကျနကျတဈခုပါပဲ။
၅။ ရှကေို့ မသိမသာကိုငျးပါ။
လူတဈယောကျနဲ့ စတှတေဲ့အခါမှာ တဈခုခုပျေါမှာ မှီထားဖို့မလိုပမေယျ့ လကျဆှဲနှုတျဆကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ ရှကေို့မသိမသာ ကိုငျးသငျ့ပါတယကျ။ ဒီလိုလုပျလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ ကိုယျဟာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး နထေိုငျတတျသူတဈယောကျဖွဈတယျဆိုတာရယျ သူပွောတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို စိတျဝငျစားတယျဆိုတာ ပွသတဲ့သဘောပါပဲ။
ကဲ . . ဒီအခကျြတှကေ ပထမဆုံးစတှတေဲ့အခြိနျမှာ သုံးတတျဖို့ ဖျောပွလိုကျတာပဲ။ ဘယျနရောတှမှော အသုံးဝငျမလဲဆိုရငျ အလုပျအငျတာဗြူးတဲ့အခြိနျရယျ ယောက်ခမလောငျးကွီးနဲ့တှမေ့ယျအခြိနျရယျပဲလေ (ဟဲဟဲ နောကျတာပါ) ။ ကဲ . . . အားလုံးအဆငျပွကွေပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။